Ciidammadda Ilaaladda Xeebaha Oo beeniyay in maleeshiyo ONLF ahi ka soo degeen xeebta Bulo-caddo | FooreNews
Home wararka Ciidammadda Ilaaladda Xeebaha Oo beeniyay in maleeshiyo ONLF ahi ka soo degeen xeebta Bulo-caddo
Ciidammadda Ilaaladda Xeebaha Oo beeniyay in maleeshiyo ONLF ahi ka soo degeen xeebta Bulo-caddo
Hargeysa (Foore)- Taliyaha ciidanka Ilaaladda xeebaha Somaliland Gen. Axmed Aw- Cismaan, ayaa maanta waxba kama jiraan ku tilmaamay war sheegayay in xeebta galbeedka Somaliland ay ka soo degeen maleeshiyo ka tirsan jabhadda ONLF, warkaasi oo uu daabacay Wargeyska Madaxa banaan ee OGAAL.
Taliyaha ciidammadda ilaaladda xeebaha Somaliland wuxuu sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay wasaaradda arrimaha gudaha.
Taliyaha oo ka hadlayay warkaasi wuxuu yidhi “Waxaan idiinku yeedhay inaan beeniyo oo aan caddeeyo war ku soo baxay Wargeyska Ogaal maanta 20/02/2012-ka oo sheegaya in ciidammo ONLF ahi ay ka soo degeen xeebta Galbeedka Somaliland ee Bulo-caddo oo ay yidhaahdeen meeshii ay berigii hore ka soo degeen lafteedii ayay ka soo degeen. Warkaasi waa mid aan sal iyo raad-toona lahayn. Warkaasi waa war fool xun oo badheedh ah oo ku xumayn ah oo nusqaan ah oo aan meel laga keenay aanu jirin. Waa war nusqaaminaya hawl-galadda ciidammadda ilaaladda xeebaha iyo ciidamadda qaranka oo taakuleeya oo baddaha ilaaliya.”
Gen. Axmed Aw-Cismaan oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waa war nusqaaminaya dawladda Somaliland ee heeganka u ah ilaalinta baddaheena iyo dhawrida dawladaha aynu jaarka nahay ee aynu wada shaqaynta amniga iyo ganacsigaba leenahay waa war culayskiisa leh oo xumaantiisa leh. Waa war wargeyskaasi oo qudhi qoray. Gacanta ayaa lagu hayaa inankii qoray ee masuuliyadda warkaasi qoray. Inankii warkaasi qoray ciidammadda ammaanka ayaa baadhaya oo gacanta ku haya.”
Taliyaha ciidanka Ilaaladda xeebaha Somaliland waxa uu sheegay inay ciidammadda ilaaladda xeebuhu ay ku sugan yihiin heeganna kaga jiraan dhammaan xeebaha Somaliland oo dhan.
“Ciiddamadda ilaaladda xeebuhu waxay degan yihiin dhammaan xeebaha Somaliland illaa Bulo-caddo waana laga tabaabushaystay, waxaana kaalmeeya ciidammadda qaranka, xeebta Somaliland meel laga soo galaa ma jirto waana xeeb ilaashan, sidaasi ayaanan warkaasi ku beenaynayaa,”ayuu yidhi Taliyuhu.
Gen . Axmed Aw-Cismaan oo la weydiiyay inuu jiray tuhuno hore loo qabay oo la xidhiidhay in kooxo ONLF ahi ku soo wajahan yihiin xeebaha Somaliland, waxaanu yidhi “Marka hore war ayaanu helay waanu ka diyaar-garownay, gobolka oo dhan ayaa heegan ka galay. Jabuuti ayaa arrintan xataa heegan ka gashay anagaa heegan ka galay waana wax la wada ogsoonaa oo la iska ilaalinayay wax allaale iyo wax soo degayna may jirin. Waxaanu u qaadanay war badheedh loo sameeyay.”
Taliyaha ciidammadda ilaaladda xeebaha oo la weydiiyay inuu jiray markab u rarnaa Ganacsato reer Somaliland ah oo lagu afduubay xeebaha dalka Cumaan, waxaanu yidhi “Markabka waanu maqalay waxa la yidhi xeebta Cumaan ayaa lagu afduubay ayaa la yidhi nin budhcad badeed ah oo isku urursanayay meelahaasi Boosaaso shishadeedda ayaa afduubay baa la yidhi. Illaa imikana markabkaasi wuu maqan yahay meel aanu hawl gal ka samayn karnana ma aha ee waa xeebta Cumaan.”
Previous PostHargeysa: Xaflad Lagu xusayay sanad-guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay maalintii dhagax-tuurka Next PostHanti-dharaha Guud oo ka hadlay baadhitaano ay ka bilaabeen wasaaradda khaarajiga